Jeremiah 48 (Myanmar/Burmese: Judson (1835)); The Lord (Dole) # 53České uživatelské rozhraní
1 ဣသရေလအမျိုး၏ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခဘုရားသခင်ကောင်းကင် ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရားဘုရားသည် မောဘမောဘပြည်ကို ရည်မှတ်၍ မိန့်တော်မူသည်ကား၊ နေဗောမြို့သည် အမင်္ဂလာရှိ၏။ ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လေ၏။ ကိရယ သိမ်မြို့သည် ရှုံး၍လုယူခြင်းကို ခံရ၏။ မိသဂပ် မြို့ သည်လည်း ရှုံး၍ စိတ်ပျက်လေ၏။
2 မောဘမောဘပြည်သည် နောက်တဖန် ဟေရှဘုန်ဟေရှဘုန် မြို့၌ မဝါကြွားရ။ ရန်သူတို့က၊ မောဘမောဘပြည်ကို ပြည်မဖြစ် စေခြင်းငှါ ပယ်ရှားကြကုန်အံ့ဟု၊ ရန်ပြုမည့်အကြံနှင့် ကြံစည်ကြ၏။ အိုမာဒမေနမြို့၊ သင်သည်လည်းပျက် စီးရမည်။ ထားဘေးသည် သင့်ကိုလိုက်လိမ့်မည်။
3 ဟောရနိမ်မြို့၌လည်း ညှဉ်းဆဲခြင်းနှင့် ပြင်းစွာ သော ပျက်စီးခြင်းရှိ၍၊ အော်ဟစ်သောအသံအသံကိုကြားရ၏။
4 မောဘမောဘပြည်သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်၍၊ သူငယ်တို့သည် မြည်တမ်းသောအသံကိုပြုကြ၏။
5 ငိုငိုကြွေးသောအသံသည် လုဟိတ်တောင်ပေါ်သို့ တက်ရ၏။ ဟောရနိမ်မြို့သို့ဆင်းရာအရပ်၌လည်း၊ ဆုံးရှုံးခြင်းအသံကိုရန်သူရန်သူတို့သည် ကြားကြားရကြ၏။
6 အသက်လွတ်အံ့သောငှါပြေးကြလော့။ လွင်ပြင် ၌ရှိသော သစ်ပင်ခြောက်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြလော့။
7 သင်သည်မိမိဆည်းဖူးသော ဘဏ္ဍာဥစ္စာကို ကိုးစားသောကြောင့်၊ သူတပါးလက်သို့ရောက်ရလိမ့်မည်။ ခေမုရှဘုရားကိုလည်း သူ၏မင်း၊ သူ၏ယဇ်ပုရောဟိတ်ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ နှင့်တကွ သိမ်းသွားကြလိမ့်မည်။
8 လုယူသောသူလုယူသောသူသည် မြို့များမြို့များအစဉ်အတိုင်း ရောက်လာလာ၍ မြို့မြို့တမြို့မြို့မျှမလွတ်ရ။ ချိုင့်နှင့်တကွ လွင်ပြင် သည်လည်း၊ ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်ရလိမ့်မည်။ ထိုသို့ ထာဝရဘုရားဘုရား မိန့်တော်မူပြီ။
9 မောဘမောဘပြည်သည် လွတ်ရာသို့ ပြေးရအောင် ငှက်တောင်တို့ကို ပေးပေးလော့။ မြို့မြို့တို့သည်နေနေသောသူမရှိ၊ လူဆိတ်ညံရာဖြစ်ကြလိမ့်မည်။
10 ထာဝရဘုရားဘုရား၏ အမှုတော်ကို ကြိုးစား၍ မဆောင်သော သူသည် ကျိန်ဆဲခြင်းကိုခံစေ။ လူအသက် ကို မသတ်ဘဲမိမိထားကို သိမ်းရုပ်သောသူသည် ကျိန်ဆဲ ခြင်းကိုခံစေ။
11 မောဘမောဘသည်အိုးတလုံးမှ တလုံးသို့မပြောင်း၊ တကျွန်းတနိုင်ငံသို့ ယူသွားခြင်းကိုမခံ၊ ငယ်သော အရွယ်မှစ၍ ငြိမ်လျက်၊ မိမိအဖတ်အနည်ပေါ်၌ နေရာ ကျလျက်ရှိသောကြောင့်၊ မိမိအရသာအရသာသည် တည့်နေ၏။ မွှေးသောအနံ့အနံ့လည်း မပျက်။
12 သို့ရာတွင် ထာဝရဘုရားဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ စောင်းစောင်း၍ထားတတ်သောသူတို့ကို သူ့ထံသို့ ငါစေလွှတ်ရ သော အချိန်ရောက်လိမ့်မည်။ သူတို့သည် မောဘကို စောင်းစောင်း၍ ထားပြီးလျှင်၊ သူ၏အိုးတို့ကိုသွန်၍ ရေဘူးတို့ကို ခွဲကြလိမ့်မည်။
13 ဣသရေလအမျိုးသည် မိမိတို့ခိုလှုံသော ဗေသလဗေသလဘုရားကြောင့် ရှက်ရသကဲ့သို့၊ မောဘမောဘအမျိုး သည်လည်း ခေမုရှဘုရားကြောင့် ရှက်ရလိမ့်မည်။
14 ငါတို့သည်အားကြီးသောအားကြီးသောသူ၊ စစ်တိုက်ခြင်းစစ်တိုက်ခြင်းငှါ တတ်စွမ်းနိုင်သော သူဖြစ်ကြ၏ဟု၊ သင်တို့သည် အဘယ်သို့ ပြောဆိုကြလိမ့်မည်နည်း။
15 မောဘမောဘပြည်သည် ပျက်စီးပြီ။ မြို့မြို့တို့သည် ကျွမ်း လောင်ကြပြီ။ သူရွေးချယ်သောလုလင်တို့သည် ကွပ်မျက် ခြင်းကိုခံအံ့သောငှါ ဆင်းသွားကြပြီဟု၊ ကောင်းကင် ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားဘုရားဟူ၍ ဘွဲ့နာမရှိသော ရှင်ဘုရင်မိန့်တော်မူ၏။
16 မောဘမောဘကို လုပ်ကြံရသောအချိန်နီးပြီ။ သူခံရ သောဘေးသည် အလျင်အမြန်အလျင်အမြန်လာ၏လာ၏။
17 သူ့ပတ်လည်၌နေသော သူအပေါင်းတို့၊ သူ့အတွက်မြည်တမ်းကြလော့။ သူ၏နာမကို သိသိသော သူအပေါင်းတို့၊ တန်ခိုးကြီးသောလှံတံလှံတံ၊ အသရေတင့်တယ် သောတံဖျာသည် ကျိုးလေပြီတကားဟု ပြောဆိုကြ လော့။
18 ဒိဘုန်မြို့၌နေနေသောသတို့သမီးသမီး၊ သင်ခံစားရ သော စည်းစိမ်မှ ဆင်း၍အငတ်ခံလျက်ထိုင်ထိုင်လော့။ မောဘမောဘကို လုယူသောသူလုယူသောသူသည် သင်ရှိရာသို့လာ၍၊ သင်၏ရဲတိုက်တို့ကို ဖျက်ဆီးဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။
19 အိုအာရော်မြို့သား၊ လမ်းလမ်းနားမှာရပ်ရပ်၍ ကြည့်ရှု လော့။ အဘယ်အမှုရှိသနည်းဟု၊ ပြေးသောယောက်ျားနှင့် အသက်လွတ်သော မိန်းမကိုမေးမြန်းလော့။
20 မောဘမောဘသည်စိတ်ပျက်လေ၏။ ပြိုလဲလျက်ရှိ၏။ ငိုငိုကြွေးမြည်တမ်းကြမြည်တမ်းကြလော့။ မောဘမောဘသည် ပျက်စီးကြောင်း ကို အာနုန်မြို့၌ ကြားပြောကြလော့။
21 လွင်ပြင်နှင့်တကွဟောလုန်မြို့၊ ယဟာဇမြို့၊ မေဖတ်မြို့၊
22 ဒိဘုန်မြို့၊ နေဗောမြို့၊ ဗက်ဒိဗလသိမ်မြို့၊
23 ကိရယသိမ်မြို့၊ ဗက်ဂမုလမြို့၊ ဗက်မောင်မြို့၊
24 ကေရုတ်မြို့မြို့၊ ဗောဇရဗောဇရမြို့မြို့မှစ၍၊ မောဘမောဘပြည်ပြည်၌ ရှိသောမြို့မြို့ အနီးအဝေးရှိသမျှတို့သည် အပြစ်ဒဏ်ကို ခံရ ကြ၏။
25 မောဘမောဘ၏ဦးချိုသည် ပြတ်လေပြီ။ သူ၏လက်လက်ရုံး သည် ကျိုးလေပြီဟု ထာဝရဘုရားဘုရားမိန့်တော်မူ၏။
26 မောဘမောဘသည် ထာဝရဘုရားဘုရားတဘက်၌ ဝါကြွား သောကြောင့် သူ့ကိုယစ်မူးစေကြလော့။ သူသည် မိမိ အန်ဖတ်၌ လူးလည်း၍ ကဲ့ရဲ့ခြင်းကို ခံရ၏။
27 သင်သည်ဣသရေလကို ကဲ့ရဲ့ပြီမဟုတ်လော။ သို့ရာတွင်၊ သူသည်သူခိုးတို့နှင့်ပေါင်းဘော်သည်ကို တွေ့ဘူးသလော။ သူ၏အကြောင်း ကိုပြောလေရာရာ၌ သင်သည်ခေါင်းကိုညှိတ်ပါသည်တကား။
28 မောဘမောဘပြည်၌နေနေသောသူတို့၊ မြို့မြို့တို့ကိုစွန့်၍ ကျောက်ကျောက်ကြား၌ နေနေကြလော့။ မြေတွင်းဝနားမှာ အသိုက်အသိုက် လုပ်တတ်သော ချိုးချိုးဝှက်ကဲ့သို့ ပြုကြလော့။
29 မောဘမောဘ၏မာနမာနကိုငါတို့သည် ကြားကြားသိကြ၏။ အလွန်ကြီးသော မာနမာနဖြစ်၏။ မာနမာနကြီးခြင်း၊ ထောင်လွှား စော်ကားခြင်း၊ စိတ်နှလုံးနှလုံးမြင့်ခြင်းရှိသော်လည်း၊
30 သူ၏ဒေါသအမျက်ထွက်ခြင်းကို ငါသိသိသည် ဖြစ်၍၊ သူသည် အချည်းနှီးသက်သက်ဝါကြွားသော စကားကို ပြောလျက်နှင့်၊ မိမိအလိုမပြည့်စုံရာဟု ထာဝရ ဘုရားဘုရားမိန့်တော်မူ၏။
31 ထိုကြောင့်၊ မောဘမောဘအတွက်ငါသည် ညည်းတွား မြည်မြည်တမ်းမည်။ မောဘမောဘအတွက်ငါသည် ညည်းတွား မြည်မြည်တမ်းမည်။ မောသပြည်တပြည်လုံးအတွက် ငိုငိုကြွေး မည်။ ကိရဟရက်မြို့သားတို့အတွက် ညည်းတွားခြင်း ရှိရမည်။
32 အိုစိဗမာစပျစ်နွယ်ပင်၊ ယာဇာမြို့ယာဇာမြို့အတွက် မျက်ရည်ကျကျသည်ထက်၊ သင့်အတွက် ငါသည် မျက်ရည် မျက်ရည်ကျကျမည်။ သင်၏အညွန့်တို့သည် ပင်လယ်ပင်လယ်ကိုလွန်၍၊ ယာဇာပင် လယ်တိုင်အောင်ရောက်ကြ၏။ ဖျက်ဆီးဖျက်ဆီးသောသူသည် သင်၏သစ်သီးနှင့် စပျစ်သီးတို့ကို လုယူ၏။
33 ဝပြောသောလယ်ပြင်နှင့် မောဘမောဘပြည်ပြည်ထဲမှာ ဝမ်းမြေမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းပြတ်လေပြီ။ စပျစ်သီးနယ်ရာ ကျင်း၌စပျစ်ရည်ကို ငါပြတ်စေပြီ။ ကြွေးကြော်သံကိုပြု၍ စပျစ်သီးကိုမနင်းရ။ ကြွေးကြော်သော အသံလည်း ကြွေးကြော်သောအသံမဟုတ်ရ။
34 ဟေရှဘုန်မြို့ဟေရှဘုန်မြို့ ငိုကြွေးသံမှစ၍ ဧလာလေမြို့၊ ယာဟတ်မြို့တိုင်အောင်၎င်း၊ ဇောရဇောရမြို့မှစ၍ ဟောရနိမ် မြို့တိုင်အောင်၎င်း သုံးနှစ်အသက်ရှိသော နွားမမြည် သံကဲ့သို့အသံအသံကို လွှင့်ကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ နိမရိမ် ရေရေကန်တို့သည်လည်း ဆိတ်ညံလျက်ရှိကြ၏။
35 မောဘမောဘပြည်၌မြင့်သော အရပ်ပေါ်မှာ ပူဇော် သောသူ၊ မိမိဘုရားဘုရားတို့အား နံ့သာပေါင်းကို မီးရှို့သော သူတို့ကို ငါပြတ်စေမည်ဟု ထာဝရဘုရားဘုရား မိန့်တော်မူ၏။
36 ထိုကြောင့်၊ ငါနှလုံးနှလုံးသည် မောဘမောဘပြည်အတွက် ပုလွေကဲ့သို့ မြည်ရလိမ့်မည်။ ငါ့နှလုံးနှလုံးသည် ကိရဟရက် မြို့သားတို့အတွက် ပုလွေကဲ့သို့ မြည်ရလိမ့်မည်။ သူတို့ ဆည်းဖူးသော ဘဏ္ဍာဥစ္စာပျက်စီးပြီ။
37 လူတိုင်းဆံပင်တိုလျက်၊ မုတ်ဆိတ်ကိုရိတ်ရိတ်လျက်၊ လက်လက်၌ရှနလျက်၊ ခါးခါး၌လျှော်တေအဝတ်ကိုလျှော်တေအဝတ်ကို ဝတ်လျက် ရှိရ၏။
38 အသုံးမရသော အိုးကိုခွဲတတ်သကဲ့သို့၊ မောဘမောဘ ပြည်ကို ငါခွဲသောကြောင့်၊ မောဘမောဘပြည်အိမ်မိုးများ အပေါ်၌၎င်း၊ လမ်းများ၌၎င်း၊ ညည်းတွားမြည်တမ်း ခြင်းနှံ့ပြားရမည်ဟု ထာဝရဘုရားဘုရားမိန့်တော်မူ၏။
39 သူတို့ကလည်း၊ မောဘမောဘပြည်ပြိုပျက်လေပြီ တကား၊ ရှက်၍ဆုတ်သွားလေပြီတကားဟု ညည်းတွား မြည်တမ်းကြမြည်တမ်းကြလိမ့်မည်။ မောဘမောဘသည် အရှက်ကွဲ၍ ကဲ့ရဲ့ ခြင်းကိုခံရလျက်၊ ပတ်လည်၌နေသော သူအပေါင်းတို့၏ ကြောက်လန့်စရာအကြောင်းဖြစ်ရလိမ့်မည်။
40 ထာဝရဘုရားဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ရန်သူသည် ရွှေလင်းတရွှေလင်းတပျံပျံတတ်သကဲ့သို့ပျံပျံလာ၍၊ အတောင်တို့နှင့် မောဘမောဘပြည်ကိုအုပ်မိုးလိမ့်မည်။
41 မြို့တို့ကိုလုပ်ကြံ၍ ရဲတိုက်တို့ကို တိုက်ယူသော ကြောင့်၊ ထိုနေ့နေ့၌မောဘမောဘအမျိုးသူရဲတို့ စိတ်နှလုံးနှလုံးသည်၊ သားဘွားခြင်းဝေဒနာကိုခံရသော မိန်းမမိန်းမ၏စိတ်နှလုံးနှလုံး ကဲ့သို့ဖြစ်ရလိမ့်မည်။
42 မောဘမောဘသည် ထာဝရဘုရားဘုရားတဘက်၌ ဝါကြွား သောကြောင့်၊ နောက်တဖန် ပြည်မဖြစ်နိုင်အောင် ပျက်စီးရလိမ့်မည်။
43 အိုမောဘမောဘအမျိုးသား၊ သင်သည် ကြောက်လန့် ဘွယ်သောအရာ၊ မြေတွင်း၊ ကျော့ကွင်းကျော့ကွင်းထဲသို့ ရောက် လေပြီ။
44 ကြောက်လန့်ဘွယ်သောအရာမှ ပြေးသော သူသည် မြေတွင်းထဲသို့ ကျကျလိမ့်မည်။ မြေတွင်းမှ လွတ်သောသူသည် ကျော့ကွင်းကျော့ကွင်း၌ကျကျော့မိလိမ့်မည်။ ဆုံးမ ခြင်းကိုခံရသော နှစ်ကာလကို မောဘမောဘပြည်သို့ ငါရောက် စေမည်ဟု ထာဝရဘုရားဘုရားမိန့်တော်မူ၏။
45 ပြေးသောသူတို့သည်အားကုန်သောကြောင့်၊ ဟေရှဘုန်မြို့ဟေရှဘုန်မြို့အရိပ်အရိပ်ကို ခိုကြသော်လည်း၊ ရှိဟုန်ဘုရင် နေရာဟေရှဘုန်မြို့ဟေရှဘုန်မြို့မှ မီးလျှံမီးလျှံထွက်သဖြင့်၊ မာနထောင် လွှလွှားသောသူတို့၏ အထွဋ်မှစ၍ မောဘမောဘပြည်စွန်း တိုင်အောင် လောင်လိမ့်မည်။။
46 အိုမောဘမောဘပြည်၊ သင်သည်အမင်္ဂလာရှိ၏။ အိုခေမုရှတပည့်တို့၊ သင်တို့သည် အကျိုးနည်းကြပြီ။ သင်တို့၏ သားသားသမီးသမီးများကို သိမ်းသွင်း ကြပြီ။
47 သို့ရာတွင်၊ သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသော မောဘမောဘ အမျိုးသားတို့ကို နောင်ကာလ၌ငါဆောင်ခဲ့ဦးမည်ဟု ထာဝရဘုရားဘုရားမိန့်တော်မူ၏။ ဤရွေ့ကား၊ မောဘမောဘခံရ သော အပြစ်တရားပေတည်း။
'Psalteries' correspond to spiritual good.
The Lord # 53
53. As for the Word itself, it does not say in the prophets that they spoke it from the Holy Spirit but that they spoke it from Jehovah, Jehovah Sabaoth, or the Lord Jehovih, since it says that the Word of Jehovah came to me, that Jehovah spoke to me, and very often, Jehovah said and the saying of Jehovah. Since the Lord is Jehovah, then (as already explained [, ]), the whole Word was spoken by him.
So that no one will doubt that this is the case, I want to list the places in Jeremiah alone where it says the Word of Jehovah came to me, Jehovah spoke to me, Jehovah said, and the saying of Jehovah, which are the following: Jeremiah 1:4, 11-14, 19; 2:1-5, 9, 19, 22, 29, 31; 3:1, 6, 10, 12, 14, 16; 4:1, 3, 9, 17, 27; 5:11, 14, 18, 22, 29; 6:6, 9, 12, 15-16, 21-22; 7:1, 3, 11, 13, 19-21; 8:1, 3, 12-13; 9:3, 6-7, 9, 13, 15, 17, 22-25; 10:1-2, 18; 11:1, 6, 9, 11; 12:14, 17; 13:1, 6, 9, 11-15, 25; 14:1, 10, 14-15; 15:1-3, 6, 11, 19-20; 16:1, 3, 5, 9, 14, 16; 17:5, 19-21, 24; 18:1, 5-6, 11, 13; 19:1, 3, 6, 12, 15; 20:4; 21:1, 4, 7-8, 11-12; 22:2, 5-6, 11, 16, 18, 24, 29-30; 23:2, 5, 7, 12, 15, 24, 29, 31, 38; 24:3, 5, 8; 25:1, 3, 7-9, 15, 27, 29, 32; 26:1-2, 18; 27:1-2, 4, 8, 11, 16, 19, 21-22; 28:2, 12, 14, 16; 29:4, 8-9, 19-21, 25, 30-32; 30:1-5, 8, 10-12, 17-18; 31:1-2, 7, 10, 15-17, 23, 27-28, 31-38; 32:1, 6, 14-15, 25-26, 28, 30, 36, 42; 33:1-2, 4, 10-13, 17, 19-20, 23, 25; 34:1-2, 4, 8, 12-13, 17, 22; 35:1, 13, 17-19; 36:1, 6, 27, 29-30; 37:6-7, 9; 38:2-3, 17; 39:15-18; 40:1; 42:7, 9, 15, 18-19; 43:8, 10; 44:1-2, 7, 11, 24-26, 30; 45:1-2, 5; 46:1, 23, 25, 28; 47:1; 48:1, 8, 12, 30, 35, 38, 40, 43-44, 47; 49:2, 5-7, 12-13, 16, 18, 26, 28, 30, 32, 35, 37-39; 50:1, 4, 10, 18, 20-21, 30-31, 33, 35, 40; 51:25, 33, 36, 39, 52, 58.
These are from Jeremiah alone. It says things like this in all the other prophets and does not say that the Holy Spirit spoke or that Jehovah spoke to them through the Holy Spirit.
(Odkazy: Jeremiah 1:7, 9:7-8, 9:7, 9:22, 9:24-25, 11:17, 11:17-18, 11:21-22, 17:19-20, 17:21, 22:1-3, 23:1-2, 23:4-5, 23:5-7, 23:11, 23:16, 25:27-29, 29:16, 32:44, 34:12-14, 45:4-5, 47:1-2)
Apocalypse Revealed 36, 472, 490, 666